Zvimwe paBlogIN, Vhidhiyo | Martech Zone
Muvhuro, April 28, 2008 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
The mumhanzi kune ino vhidhiyo yakaipa kwazvo… Ndinozvida! Imwe vhidhiyo yakakura kubva kuZack Legend.
Ndiri kushanda pane akati wandei mablog eBlogIN pa Mudiki Indiana kupfupisa ruzivo rwandakavimbisa munhu wese. Ndiri kungomhanya kumashure (senguva dzose).
Tags: Crystal GuvachidhidhoMagentonharembozha email dhizainichaiyo nguva analytics-Chaicho nguvamamiriro ekunze anotarisakunyora
Ini ndinotenda muWebhu 3.0!